Nolazaina izay hatao, hatao izay nolazaina… | NewsMada
Nolazaina izay hatao, hatao izay nolazaina…
Vita ihany iny ny fifidianana filohan’ny Repoblika, fihodinana faharoa. Amim-pitoniana sy amim-pahendrena no iaraha-miandry hatramin’ny farany izay vokatra eo. Na ahoana na ahoana, tsy maintsy misy resy sy mpandresy. Izay ny anton’ny fandatsaham-bato, araka izay safidin’ny maro anisa amin’ny vahoaka… tompon’ny teny farany.
Ho vita ihany izay fanisam-bato, ho hita izay ho vokany. Hanao ahoana ny aorian’izay? Eo ny raharaha… Hiatrika avy hatrany ny fananganana ireo andrimpanjakana manaraka hirosoana amin’ny fanarenam-pirenena sy fampandrosoana sa mbola hifandrozona lava amin’ny voka-pifidianana? Izay no mila ny hoe mahay resy, mahay mandresy.
Izay resy na tombanana ho izany sahady, mba hanaiky ny voka-pifidianana. Izay no safidim-bahoaka! Mitaky toe-tsaina izay, toe-po sy toe-panahy. Misy milaza fa ny mpanohana sy mpomba no tsy laitra. Anjaran’izay resy ny mifehy sy mifampifehy ny amin’izany? Tsy efa fianarana sy fizarana amin’ny hoe fitondrana fanjakana ve izay?
Tsy hafa ary manoatra no ho izany aza ny an’ny mpandresy na efa mahazo antoka ny amin’izany: adidy mavesatra ny miandry, tsy misy hataka andro. Tsy vitan’izay na vita eo ny hoe fandresena fa mila fandresen-tena na fanetren-tena: tsy hamaly faty, hihaino ny hafa, tsy hanavakavaka… Tsy ananan-kavana ny raharaham-pirenena.
Ho an’ny mpandresy, ahoana amin’izay ny hanatanterahana ny fampanantenana sy fanamby? Izay ny anton’ny safidin’ny maro anisa mitadidy ny teny nomena azy, hanara-maso ny fanatanterahana, hitaky tamberin’andraikitra… Vava asa amin’izay ny aorian’ny asa vava tamin’ny fampielezan-kevitra nakana ny fo sy ny vaton’ny mpifidy.
Amin’izany, tena mba hisy amin’izay ve, ohatra, ny hoe fangaraharana sy ny fanajana ny teny nomena? Nolazaina izay hatao, hatao izay nolazaina. Toy izany koa ny amin’ny fisaraham-pahefana, ny fanajan-dalàna, ny fahaiza-mitantana… Miainga amin’izany ny famitana ny hetahetam-bahoaka: tsy fandriampahalemana, fidangan’ny vidim-piainana…